News - Top 10 Best Microfiber Towels na 2021 Nyocha
Gini mere akwa nhicha microfiber ji nweta aha di oke nma na nso nso a? Nke a bụ nnukwu arụmụka na nyiwe dị iche iche banyere ịdị irè nke microfiber. Ma, ọ bụrụ na ihe na-adọta mmasị na-echegbu onwe, ọtụtụ ihe dị mma banyere ya. Ndị nchọpụta sayensị egosiwo na teknụzụ microfiber na-enye ụzọ kachasị mma iji dị ọcha.
Kedu ka ị ga - esi amata ọdịiche dị n'etiti ndị na - adịghị mma microfibers? Isiokwu a dị ebe a iji wụsa ozi kachasị mma iji zaa ajụjụ gị ma mesịa nye gị microfibers kachasị elu. Ugbu a, enwere ọtụtụ ihe ịkwesịrị ịtụle mgbe ịzụrụ akwa microfiber kacha mma. Nnwale mbụ ị ga-ebu bụ ule ahụ ịmịkọrọ ihe. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ma ọ bụ ọ na-ewe oge iji dọọ mmiri. Na nke a, ịkwesịrị ịlele ma mmiri wicks ngwa ngwa.
Ihe nke abuo bu nro nke ihe, ma enwere uzo isi mara nke a. Naanị jidere akwa nhicha ahụ ma ịhịa aka ya ntakịrị. Ọ bụrụ na ọ jidere na ụdị osisi na ezughị okè na akpụkpọ ahụ, ọ pụtara na ọ dịghị nro n'ụzọ ọ kwesịrị. Ọ bụrụ na o siri ike, mgbe ahụ ọ ga-amachapụta njedebe nke mputa ụgbọ ala gị. Akụkụ ọzọ bụ ogologo oge, na microfiber dị elu kwesịrị ịgafe ule ahụ. Ikwesiri ileba ibu ahụ anya ma hụ ma ọ dịkarịa ala ma ọ dịkarịa ala 250 grams kwa mita mita (GSM)
10. Rainleaf Microfiber akwa nhicha
You chọrọ ịnụ ụtọ ihicha ọsịsọ na ntụsara ahụ? Chọrọ akwa microfiber kacha mma maka ahụmịhe kachasị mma. Otu n'ime nhọrọ kachasị mma ịhọrọ bụ Rainleaf microfiber towel. Ọ na-adọrọ adọrọ ma na-abịa na agba mara mma. Ọ bụ fechaa na kọmpat ekwe ka mfe njikwa na ohere-azọpụta n'oge nchekwa. Ọzọkwa, ọ dị mfe ịsacha ma kpoo ngwa ngwa. Ya mere, ọ bụ mildew na-eguzogide ọgwụ ma ghara ikwe ka nje na-eme nke ọma.
Ọ dịkwa mma maka na ọ naghị arụ ọrụ anụ ahụ. Njirimara hanga snap loo dị mkpa n’ihi na ọ na-eme ka ọ dị mfe ma baa uru iji kwụba ya ebe ọ bụla. Ọ na-abịa na-enweghị mmiri na reusable ebu akpa. Site na nke a, nke a bụ akwa nhicha zuru oke maka igwu mmiri, akpaazụ azụ, njem, osimiri, mgbatị ahụ, n'etiti ebe ndị ọzọ.
9. Relefree Microfiber akwa nhicha
Ngwa ngwa n'oge na ikike dị mma na-eme ka Microfiber Relefree Towel bụ otu n'ime ihe kacha mma. Ọ bụ kọmpat na fechaa na adabara kwa ụbọchị na njem were. Yabụ, ọ dabara na ngwugwu mgbatị ahụ gị, akpa akpa, ma ọ bụ obere akpa gị. Ihe owuwu microfiber a na-eji otu n’ime microfibers mara mma. Ọ bụ n’ụzọ dị nro ma sie ike karịa silk.
Yabụ, ọ dị mma maka akpụkpọ anụ siri ike dịka anụahụ nwata. Sdị ya na-eguzogide na hypoallergenic na-eme ka ọ dị mma maka mgbatị. Ihicha ngwa ngwa bụkwa uru ọzọ nke akwa nhicha microfiber a. Ọfọn, ọ bụ ihe dị ka ugboro 10 ngwa ngwa ihicha karịa owu na akwa akwa terry.
8. Premium Microfiber Detail Towels
Ndị a so n'ime akwa nhicha microfiber kachasị mma. Ọ na-etu ọnụ nke ngwakọta polyester na microfiber zuru oke. Ndị a zuru oke maka ọrụ nkọwapụta akpaaka. Ọfọn, microfiber gbawara agbawa na ikpo ikpo abụọ na-enyere aka n'ịkụ azụ dịgasị iche iche na-akọwa ọrụ nhicha ụgbọ ala. Ọ na-egosipụta akụkụ ikpo ogologo na akụkụ dị mkpirikpi.
The ogologo n'akụkụ bụ magburu onwe maka buffing na polishing mgbe mkpumkpu ikpo n'akụkụ dị ukwuu n'ihi na iko na wax wepụ. Ọzọkwa, atụmatụ ahụ dị nro satin dị iche iche na enweghị njigide mkpado, nke na-eme ha oke nwayọ na njedebe ụgbọ ala. E wezụga nke ahụ, ọ zuru oke maka ihichapụ irighiri ihe si na akpụkpọ anụ, vinyl, akwa, akpụkpọ, na ebe ndị ọzọ. Ya mere, ọ na-enye ezi ọtụtụ ọrụ.
7. BOGI Microfiber Njem Egwuregwu
Nke a bụ akwa nhichapụ microfiber ọzọ maka dollar gị. Emere ya nke ọma site na iji 100 pasent adịgboroja microfiber. Ọ dị oke nro, dịkwa fechaa, na kọmpat. Ọzọkwa, ihe ahụ bụ hypoallergenic ma nwee oke absorbency ọnụego. Ọ kpọrọ nkụ ihe dị ka ugboro 4 karịa ngwa ngwa mgbe niile. Ọ na-egosipụta ụdị ejiji ejiji ga-agbakwunye ebe ọ bụla ị gara.
Ọ na-abịa site na akpa ume iku ume akpa a carabineer na-eme ka ọ dị mfe ibu. E wezụga nke ahụ, ọ bụ ihe na-esi ísì ụtọ, ọ dịghịkwa ada mbà mgbe ọ na-ekpughe ìhè anyanwụ. Ọ dị ọtụtụ, ma ị nwere ike iji ya maka ihicha ntutu, ihicha ahụ, ma ọ bụ ihichapụ efere gị. Naanị ị ga-ekpebi ihe kacha mma nke akwa microfiber a, ọ ga-emere gị ihe ndị ọzọ.
6. Microfiber Towel Nhọrọ Gị
Kedu ihe ị họọrọ maka akwa nhicha microfiber kachasị mma? Nhọrọ a kpochapụwo site na Nhọrọ gị bụ oke nhọrọ. Ọ na-egosipụta ngwakọta zuru oke nke ihe nwere pasent 85 polyester na 15 naịlọn pasent. Ọ bụ otu n'ime akwa nhicha osimiri kachasị mma nke ga-eme ka ezumike ezumike gị bụrụ nke pụrụ iche n'ezie. Ọ buru ibu ma na-etu ọnụ maka ụdị ihe eji acha odo odo. Ọfọn, nke a ga-eme ka ị pụọ na ala.
Ọ na-ada ngwa ngwa karịa akwa nhicha ahụ na-adịkarị ma na-ejide ọtụtụ ugboro ibu ya n'ihe banyere mmiri na-adọrọ adọrọ. Ọzọkwa, ọ dị ihe ruru okpukpu anọ karịa akwa terry. Ọfọn, ọ na-abịa na obere ngwa nchekwa obere akpa. Ọ bụ ahụkebe osimiri njem microfiber towel nke ga-agbanwe n'ezie ezumike gị ahụmahụ.
5. Elite Trend Microfiber Beach akwa nhicha
Ga-achọ akwa microfiber n'ihe niile ị na-eme. Ma ị na-eme mgbatị ahụ siri ike, na igwu mmiri n'akụkụ osimiri, ma ọ bụ na-esi nri na kichin, a ga-enwerịrị akwa microfiber. The Elite Trend na-enye otu n'ime akwa microfiber kacha mma. Ọ kpọrọ nkụ ugboro atọ karịa akwa nhicha ahụ. Ọ na-etu ọnụ maka ụdị mma nke ndị na-emepụta ọkwa kachasị elu.
Nwere ike ịkwalite ụdị gị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ mgbatị ahụ ka ị na-etinye onwe gị na akwa a mara mma. N'ezie, ọ zuru oke maka ndị okenye abụọ, nke a nwere ike iweta ọ funụ karịa. Microfiber a bụ hypoallergenic. Yabụ, ọ na-adị ọhụụ n’enweghị isi ọ bụla. Ọ dị nro ma na-enye aka dị nro na akpụkpọ gị, nke ị ga-ahụ n'anya n'ezie.
Nke a na-abịa dị ka otu set nke nwere ọtụtụ nha ịhọrọ site na. Ihe ndị a bụ nke 100 pasent microfiber. Ha dị nwayọọ na anụ ahụ ma dọọ na minit. N'ezie, ọ kpọrọ nkụ ọsọsọ karịa akwa nhicha ahụe akwa. N'ihe banyere ike ịmịkọrọ mmiri, ọ nwere ike ịmịkọrọ mmiri buru ibu gbasara oge nhicha akwa 5. Nwere ike ịhọrọ kọmpat, fechaa, na mkpa akwa nhicha maka njem ojiji. Ihe ndị a dị mfe ịbanye na akpa mgbatị gị ma ọ bụ akpa njem.
E wezụga nke ahụ, ị ​​ka nwere ike ịhọrọ akwa nhicha ahụ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịgbanye ruo otu kọmpat dị njikere maka backpacking. Ntọala a na-abịa na akpa na-ebu mmiri na-enweghị ume. Akpa ndị a na-ebu akpa nwere usoro nkechi maka njem na-enweghị nsogbu. Ọzọkwa, akwa nhicha microfiber a na-ahụkarị maka ngwa dị ka mgbatị ahụ, golf, ahụ ike, yoga, igwu mmiri, ịma ụlọikwuu, ma ọ bụ ime ụlọ.
Zụ akwa nhicha microfiber kacha mma dịtụbeghị mfe. Ma, Newverest Microfiber Towel Set dị ebe a iji gosipụta nke ọzọ. Otu ọ bụla nwere akwa nhicha atọ. Ga-enweta otu akwa akwa Jumbo microfiber nke zuru oke maka mgbatị na osimiri. Ọzọkwa, ị ga-enweta otu nnukwu akwa microfiber dị mma maka bat na njem. Nke ọzọ bụ obere microfiber towel dị mma maka ihicha aka na ihu.
E wezụga nke ahụ, ha dị nnọọ nro ma dị mma maka ụdị anụ ahụ niile. Hypodị hypoallergenic na ngwa ngwa ngwa ngwa na-eme ka akwa nhicha ahụ dị mma maka onye ọ bụla. Towlọ atọ ahụ dị nfe dị mfe na-abata na ha dị mfe iji buru ibu.
2. 4MONSTER Microfiber akwa nhicha
Ndị a bụ akwa nhicha microfiber dị adịchaghị mkpa. Ha dị mma maka ịma ụlọikwuu, mgbatị ahụ ma ọ bụ ojiji ezinụlọ. Ha na-akpọnwụ ngwa ngwa ma nwee ike ịmịkọrọ ihe ruru okpukpu ise karịa ibu ha. Ọzọkwa, ha bụ hypoallergenic ma yabụ na-egbochi nje na ebù. Ihe na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ ma na - egbochi isi.
Ihe nhicha ahụ ọ bụla na-abịa na igbe EVA nwere ike iji mee ihe ma kwụgidere akaghị maka nchekwa dị mfe ma dị mfe. Ọfọn, ọ bụghị naanị na ọ na-arụ ọrụ kamakwa ọ na-elekwa anya ejiji karịa akpa owu. Nke ahụ kwuru, nke a bụ akwa nhicha ahụ edoziri nke ọma maka yoga, njem, ụgbọ mmiri, picnic na ndị ọzọ.
Genovega Mandala Microfiber Pool Beach Towel na-ewetara ndị ọzọ ihe bara uru n'oge a. Akwa nhicha microfiber a nwere nha atọ dị iche iche. Nwere ike ịhọrọ n’etiti buru ibu, nnukwu-ibu buru ibu, ma buru ibu nke ezi-na-ụlọ. Otú ọ dị, ogo na nkọwa nke ihe owuwu bụ otu maka nha niile. Mpempe akwụkwọ nke ọ bụla nwere mbipụta akwụkwọ abụọ dị n'akụkụ na-eme ya ejiji.
Ha na-abata na akpa ebu akpa nke mara mma na ihu igwe. Yabụ, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eme njem. Ha na-adọrọ obi ha ngwa ngwa, ihicha ngwa ngwa, ma nwee njirimara hypoallergenic. Yabụ, ịnwere ike ịchekwa ha n’akpa mgbe ị na-agagharị, ha agaghị enwe nje ma ọ bụ isi ọ bụla. E wezụga nke a, ndị a ga-adị oke mfe ihicha ma kpoo, ma ị nwere ike ịdị ọcha mgbe niile.